ALINSA CANG, RALHRANG HMUNKIP AH HMUN HMA AN LA DIH CANG HIH – The Chinlung Post
ALINSA CANG, RALHRANG HMUNKIP AH HMUN HMA AN LA DIH CANG HIH
August 22, 2021 admin Kawlram 0
Bayintnawng hlei pawng i kahdohnak ruangah ralhrang kawlralkap hna nih Yangon hmunkip kaakip ah check hlatnak an tuah. Tuni August ni 22 ah ralhrang kawlralkap le hriamtlai phu hna cu Hlaingtharya khuachung Bazinnawng hlei pawngah an i kap. Tuni i kahdohnak ah ralhrang kawlralkap lei in minung pakhatanunnak aliam i minung zeimawzat hliam an tuar hna.
Hi kahdohnakachuah hnu ah ralhrang kawlralkap hna nih Yangon khuachung hmunkipp ka kip ah check hlatnak an tuah tiah thanhnak an tuah. Ralhrang kawlralkap hna nih Insein siseh Cukung lei tiangin check hlatnak an tuah hna. Culawng siloin Hledan lei zongah an check hna i,ahlei in Taxi pawl an check khun hna tiah driver pakhat nihachim.
Tuni thilcang ruangah ralhrang kawlralkap hna nih check hlatnak an tuahmi hiazual hma ngaingai. Cimitaing khuachung Natsin lam lei siseh Nitbaan lam lei cun Cimitaing chaklei tiangin motor pawl zong check hlatnak an tuah rih hna. Tuzing suimilam pariat hrawngah kahdohnakachuah hiasi. Acunglei langhter mi hmun le hma ah ralhrang kawlralkap tampi hna cu ralvennak an tuah i, hmunhma an la tiah theih asi.
Tlamtling tein kawlca in relchih. ဘုရင့်နောင်တံတားတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သေဆုံး ဒဏ်ရာရသည်အထိ ပစ်ခတ်ခံရ ပြီးနောက် ရန်ကုန်နေရာအနှံ့အပြား ပိုက်စိတ်တိုက်စစ်ဆေးန. ရန်ကုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်တံတားတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီ ဝန်းကျင် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ၁ ဦး ပွဲချင်းပြီး​သေဆုံးကာ ဒဏ်ရာရရှိမှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ နေရာအနှံ့အပြားကို အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ အင်းစိန် ကြို့ကုန်းဘက်မှာလည်း အရမ်းစစ်တယ်။ လှည်းတန်းဘက်မှာလည်း စစ်တယ်။ TAXI တွေ အဓိကထား စစ်တယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ရန်ကုန် TAXI သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ နတ်စင်လမ်း နှင့် နိဗ္ဗာန်လမ်း အလယ် ၊ အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမပေါ်တွင် ကားများကို ပိုက်စိတ်တိုက်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ဘုရင့်နောင်တံတားတွင် လုံခြုံရေး အစောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ပစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်သားများဘက်မှ ပြန်လည် ပစ်ခတ်သံများ ကြားရကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားရောက်ရှိနေပြီး ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ လှိုင်သာယာ၊ ကြည့်မြင်တိုင်နှင့် ကမ်းနားဘက်လမ်းတွင်လည်း စစ်ကားများ လှည့်လည်နေပြီး ရဲစခန်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် သဲအိတ်များချထား၍ တပ်စွဲမှုများရှိနေသည်ဟု ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
MAH RUANGAH HIN PEI RUNG LIAN CEU HI A RAK SUNGH KO HI